Bakteriya - Gpedia, Your Encyclopedia
Bakteriya (Af Ingiriis : bacteria; Af carabi: بكتيريا; loogu dhawaaqo: i/ˈtɪəriə/) waa noole aad u yar (ili-maqabatay ah) kaasi oo ka samaysan hal ama dhowr unug. Sida la ogyahay, noocyada ugu badan ee bakteriyada waxay leedahay midabo iyo dherer kala duwan; qaarkood waa kuwo u samaysan sida goobada, kuwo kale geeso badan leh. usgaga ama jeermiska bakteeriya waa noolayaan aan la sugi karin oo aad u yar yar isha biliaadankuna ma qabato ilaa aalad loo adeegsado way isu tagtaa oo waxa ay isugu aruurtaa meelo ay iyadu iskka leedahay oo u gaara waxa ay ka mudtahay khataraha bini aadamka dhibta wayn kuhaya khaasatan cuduro waawayn oo biniaadamka laaya asal ahaan waxa ay kasoo jeedaan iyada sida xanuuna sanbabka kudhaca ee qaaxoda.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bakteriya&oldid=151944"